माक्स खोइ ? अभियान नडाहामा... - Naya Online
माक्स खोइ ? अभियान नडाहामा…
बिहिबार, साउन २८, २०७८ (August 12th, 2021 at 7:35am ) मुख्य समाचार
नडाहा, २८ साउन । कोरोना महामारीबाट बच्न र सचेत रहन सबैलाई आग्रह गर्दै ‘तपाइँको माक्स खोइ ?’ अभियान हिजोबाट नडाहा आई पुगेको छ ।
बराहक्षेत्र नगरपालिका, क्युआरसी बराहक्षेत्र, इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर, फ्यान क्लब र मर्निङ स्टार बोर्डिङ स्कुलको समन्वयमा गत साउन २५ गतेबाट सन्चालित सो कार्यक्रम हिजोबाट नडाहामा सुरु भएको र यो अभियान नडाहामा ३ दिनसम्म रहने अस्थायी प्रहरी चौकी नडाहाका इन्चार्ज डम्बर गौतमले जानकारी दिए ।
अभियन्ताहरू नडाहामा प्रवेश गर्दैगर्दा बराहक्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर–३ र नडाहास्थित एभरेस्ट फुटबल क्लबले अभियानताहरूलाई माक्स, सेनिटाइजर उपल्ब्ध गराएको थियो । एभरेस्ट फुटबल क्लबका खेलाडी तथा शुभेच्छुकहरूले जनचेतनामुलक ब्यानर, प्लेकार्डसहित माक्स बाड्नमा समेत सहभागी भएका थिए ।
स्मरणीय छ पछिल्लो पल्टको तेस्रो लहरको करोना सङ्क्रमणबाट सजग रहन स्थानीय निकाय, प्रहरी प्रशासन र सामाजिक संघसंस्थाहरू निक्कै सक्रियताका साथ लागि परेका छन् । यो अभियान साउन २९ गतेसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ ।